स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन - Pradesh Today
Homeविचारस्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन
मंसिर १४ गते दाङसहित देशभर अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । दाङमा क्षेत्र नम्बर ३ को (२) मा प्रदेश सभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा वडा अध्यक्षको पद गरी दुई पदमा लागि आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन गर्ने गरी तयारी तिब्र पारिएको दलहरू उम्मेदवार छनौटसँगै चुनावी गतिविधि सक्रिय बनाउँदै छन् भने सम्बन्धित कार्यालयहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी थालेका छन् ।
उपनिर्वाचन हुने जिल्ला तथा क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढिसकेको छ । विशेषगरी दुई ठुला दल सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले चुनावी गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको छ भने अन्य साना दलहरूले पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि चुनावी गतिविधि सक्रिय बनाउन थालेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायले चुनावलाई भव्य र सभ्य बनाउन विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । मंसिर १४ को मिति नजिकिदै जाँदा सरोकारावाला निकायले चुनावलाई भव्य, सभ्य र सुरक्षित बनाउन के कस्ता योजना बनाएका छन् ? उपनिर्वाचनको तयारी के छ त ? लगायतका विषयमा सरोकारावाला निकायका प्रतिनिधिसँग टुडे राउण्ड टेबलमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नका लागि आइतबारमात्रै मुख्य निर्वाचान अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालय स्थापना भएसँगै उपनिर्वाचनको गतिविधि सक्रिय भएको छ । आयोगले मलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
चुनावलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि भरपूर प्रयासमा छौँ । अहिले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी मलाई दिइसकेपछि चुनावलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहितरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि म मात्र नभएर सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अदालतका श्रेष्तेदार धनीप्रसाद चपाई सहायक निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ । चुनावलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण बनाउन मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आगामी २० गते सर्वदलीय छलफल बोलाएको छ ।
त्यो छलफलले पनि चुनावलाई स्वच्छ बनाउन केही भूमिका खेल्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । कार्यालयले २१ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ ।
अहिले निर्वाचन हुने क्षेत्रभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनैतहका सरकार र सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिलाई आचारसंहिता पालना गर्न गराउन लागेका छौँ । दाङको प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित सरकारहरूले प्रचारप्रसार तथा नयाँ कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी कार्यान्वयनमा कसरी गर्ने भन्नेमा छौँ ।
भवन, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने, पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा बृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
चुनावलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण बनाउन मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आगामी २० गते सर्वदलीय छलफल बोलाएको छ । त्यो छलफलले पनि चुनावलाई स्वच्छ बनाउन केही भूमिका खेल्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
सम्बन्धित सरकारले कर्मचारी सरूवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने, तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने आचारसंहिता तोकिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि पर्छ ।
जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक, भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण, सवारी साधन प्रयोग गर्दा, प्रचारप्रसारमा सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्दा, निर्वाचन खर्च गर्दा, मौन अवधि र मतदानको दिन पालना गर्नुपर्ने आचरण लागू गर्ने विषयमा पनि २० गतेको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ने छ ।
आयोगले तोकेको आकारको मात्रै ब्यानर प्रयोग गर्न पाइने भए पनि पोस्टर बनाएर प्रचारमा भने रोक लगाउने छ ।
उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपछि अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म आमसञ्चारका माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचरण, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि लागू गरिएको छ ।
स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वातावरणमा भयमुक्त निर्वाचन गराउन आचारसंहिता लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम उपनिर्वाचन केन्द्रीय आचारसंहिता रहेको छ ।
अहिले अझै पनि त्यति गतिविधि सक्रिय छैनन् । २० कार्तिक पछिमात्रै कर्मचारी खटपटनलगायतका काम हुनेछन् । अहिले आवश्यक जनशक्ति आयोगलाई पठाएका छौँ । एक साताभित्र स्वीकृत भएर आउने छ । मतदाता नामावली पनि आइसकेको छ ।
जिल्लामा उपनिर्वाचन हुने क्षेत्र घोराही–१६ र क्षेत्र नम्बर ३ को २ मा पनि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र पनि टुङ्गो लागिसेकेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अन्य निकायले गर्ने तयारी चलिरहेका छन् । हामीले जिम्मेवारी दिएअनुसारको काम भइरहेको छ ।